ငြိမ်းဝေ: ဥရောပမဲဇာ အခန်း [ ၂ ]
ဥရောပမဲဇာ အခန်း [ ၂ ]
ဆန်စက်အလုပ်သမလေး ခင်ဝေ၊ ရေသူမကျောက်ရုပ်နှင့် မှော်ဝင်ဆည်းဆာ [ ၅ ]
လေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင် ခေတ္တထိုင်စောင့်ရသည့်အခန်း ( Departure Lounge ) ထဲတွင် ခရီးသည် (၄)ဦးသာရှိသည်။ ဥရောပတိုက်ကို ရောက်လာလို့ အအေးဓါတ်ပိုလာပြီလားဟု စိတ်ထဲကထင်မိသည်။ သို့ သော် အနွေးဓါတ်ပေးထားသည့်အခန်း ဖြစ်သဖြင့် နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းပါသည်။
ကိုပင်ဟေဂင်လေဆိပ် ဂိတ်နံပါတ်(၁၁)ထဲက မှန်ကာကြီးနှင့် အနီးဆုံးထိုင်ခုံတွင် ကျနော်သွားထိုင်လိုက်သည်။ လေယာဉ် ကွင်းထဲ လှမ်းမြင်နေရ၏။ လေယာဉ်တချို့ နှင့် ကုန်တင်ကားငယ်တချို့ ရှေ့ တိုးနောက်ငင်လုပ်နေကြ၏။ ကျနော်က အော်စလိုသို့ လေယာဉ်ထွက်ရန် တနာရီကျော်ခန့်ထိုင်စောင့်ရဦးမည်။
လက်ဆွဲသေတ္တာငယ်ထဲက “ နွေတည ” ၀တ္ထုစာအုပ်ကို ထုတ်လိုက်သည်။ စာအုပ်ကိုလှပ်ပြီး ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး အကြောအချဉ်တွေ ဖြေလျှော့ချနေမိသည်။ ကမ္ဘာ့ဝန်ရိုးစွန်းနှင့် အနီးဆုံးတိုင်းပြည်တခုသို့ တဦးတည်းခရီးထွက်လာသူ၏ ရင်ခုန်သံကို ကျနော်ပြန်ကြားနေရသည်။ ဒီကြားထဲ “ နှစ်ယောက်ထဲ နေချင်တယ် ” သီချင်းထဲက “ နေမမြင်၊ ရေအစဉ်ခဲ၊ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကိုပဲခေါ်ခေါ် ပျော်ပါမယ်၊ သဲသဲမဲမဲဇွဲနဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေချင်တယ် ” ဆိုတဲ့မာမာအေးရဲ့ သီးချင်းကို ခပ်တိုးတိုးကြားနေမိပြန်သည်။ “ နွေတည ” စာအုပ်ကိုကိုင်ရင်း ကျနော့်စိတ်တွေ လေးကန်ထိုင်းမိူင်းလာနေပြန်သည်။ “ အော်----အခုဆိုရင် “ နွေတည ” ကို ဖန်တီးခဲ့သူနိုင်ဝင်းဆွေတယောက် ဘယ်ဆီကိုရောက်လို့ဘာတွေများ ဖြစ်နေမှာပါလိမ့် ” ဟုတွေးကာ ပင့်သက်ချနေမိသည်။
နိုင်ဝင်းဆွေ၏ “နွေတည ” ၀တ္တုကိုကျနော်ဖတ်ပြီးခဲ့သည်မှာ ကြာပါပြီ။“ နွေတည ” တင်မဟုတ်။ သူရေးဖွဲ့ ခဲ့သမျှလုံးချင်းစာအုပ်အားလုံး တအုပ်မကျန်ကျနော်ဖတ်ခဲ့သည်။ တချို့ စာအုပ်ကိုတကြိမ်မက အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ အထီးကျန်ဆန်လှသည်ဟုယူဆခံစားရသည့်အချိန်တိုင်း နွေတည ကို ကျနော်သတိရနေတတ်သည်။ ဘာရယ်ကြောင့််ရယ်တော့မသိ၊ ယခုလည်း “နွေတည ” ကို ကျနော်ဖတ်ရဦးတော့မည်။ အမှန်စင်စစ် မိမိအဖို့ နယ်စပ်ဒေသသို့ထွက်ခွာလာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့သည်မှာလည်း မာနယ်ပလောတွင် စာရေးဆရာနိုင်ဝင်းဆွေ ရောက်နေသည့်ကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်လျှက်ရှိပါသည်။
နယ်စပ်ဒေသသို့ ထွက်လာဖို့ချီတုံချဖြစ်နေစဉ် ကျနော်ထံစာတစောင်ရောက် လာခဲ့သည်။ တောင်ငူမြို့ မှ စာပေ၀ါသနာရှင် လူငယ်တဦးရေးလိုက်သည့်စာဖြစ်သည်။ နိုင်ဝင်းဆွေတယောက် မာနယ်ပလောတွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းစာထဲ တွင် ပါရှိလာသည်ကို သတင်းပါးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်ကစာရရချင်း တောင်ငူမြို့ ပေါ် ကျ နော်တက်လာခဲ့သည်။ “ နိုင်ဝင်းဆွေ လွမ်းဆွတ်သတိရခြင်းအထိမ်းအမှတ် စကားဝိုင်း ” တခုလုပ်ဖြစ်ကြသည်။ ကဗျာဆရာ ကေတုဘုန်းမော် (ကွယ်လွန်) က အဓိက စီစဉ်သူ။ အထက်တန်းပြဆရာမ (၂)ဦး၊ ကဗျာဆရာ(၃) ဦး။ ကျနော်တို့ စကားဝိုင်းတွင် နိုင်ဝင်းဆွေ၏ “ နွေတည” ၀တ္တုကို အများဆုံး ပြောကြဆွေးနွေးကြရ၏။ နိုင်ဝင်းဆွေသည် စကားပြေဘုရား။ နိုင်ဝင်းဆွေသည် မာက်စ်ဝါဒီ။ နိုင်ဝင်းဆွေ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှူလမ်းကြောင်းကိုသူရေးခဲ့သည့် စာအုပ်များကိုတန်းစီကာ ကျနော်တို့ လေ့လာကြသ ည်။ ဝေဖန်ကြသည်။ လေးနက်ကြသည်။ နယ်စပ်ဒေသသို့ သွားသင့် မသွားသင့် တွေဝေလျက်ရှိသူကျနော့ကို နိုင်ဝင်းဆွေ၏ သ တင်းက ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့တွန်းပို့ လိုက်၏။ သို့ နှင့်ပင် မာနယ်ပလောသို့ကျနော်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မာနယ်ပလော တွင် နိုင်ဝင်းဆွေနှင့် ကျနော် အချိန်ကြာကြာတွေ့ ခွင့်၊ စကားပြောခွင့်မရခဲ့ပါ။နှစ်ဦးချင်းတွေ့ သည့် အချိန်များမှာလည်း ၁၉၇၈ ခုနှစ် မတိုင်ခင်ကာလများက သူနှင့် ကျနော်တို့ ၏ဆက်ဆံရေးကိစ္စများကိုသာ ပြောဖြစ်ဆိုဖြစ်နေခဲ့ကြသည်။ ကျနော်နှင့်တွေ့ ပြီး(၆) လ ခန့် အကြာတွင် နိုင်ဝင်းဆွေတယောက် ကျန်းမာရေးချို့ တဲ့လာခဲ့၏။ ထိုစဉ်မှစကာ သူသည် နဂိုလူကောင်းဘ၀သို့ပြန်ရောက်မ လာနိုင်ခဲ့တော့။ မာနယ်ပလော နေ၀င်ချိန်တွင်မှူ နိုင်ဝင်းဆွေသည် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမ်း ပဟေလူရွာထိ လိုက်ပါလာနိုင်သေး၏။ ပဟေလူရွာတွင် နိုင်ဝင်းဆွေ ရောက်ရှိနေကြောင်းကြား၍ သူု့ ကိုကျနော်သွားတွေ့ သည်။ သူသည်ကျနော့်ကိုပင် လက်ခံစကားပြော နိုင်စွမ်းမရှိတော့။ သူခေတ္တတည်းခိုနေသော အိမ်၏ဘုရားစင်အောက်တွင် တရားထိုင်နေလေသည်။ သူ့ ကို ကျနော်က ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားတော့ ကျနော့်ကိုရန်သူတယောက်ပမာ စ်ိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနှင့် တားမြစ်ခဲ့၏။ ထို့ ကြောင့်ဓါတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ရ။ ပဟေလူရွာမှာ န၀တ တပ်များ၏ လက်နက်ကြီး တကမ်းအကွာတွင်သာရှိသည်။ ကျနော်က မာနယ်ပလော၏နောက်ဆုံး အခြေအနေကို DVB သို့ သတင်းပို့နိုင်ရေး အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့၏။ ရွှေပဟိုရ်စည်စတူဒီယိုပစ္စည်းများ၊ ရဲဘော်များနှင့်အတူ တာဝန်ကျရာ နေရာသို့ ဘေးမသီရန်မခ ရွှေ့ ပြောင်းနိုင်ရေး လုံးပမ်းနေရ၏ ။ ထို့ ကြောင့် နိုင်ဝင်းဆွေကို ကျနော်ခွဲခဲ့ရသည်။ နိုင်ဝင်းဆွေကို မကူညီနိုင်ခဲ့။
“ နွေတည ” ၀တ္ထုကို ရေးဖွဲ့ သူ စာရေးဆရာ “ နိုင်ဝင်ဆွေ ” အကြာင်း ကျနော်တွေးနေစဉ် ခန်းမကြီးထဲ၌ ခရီးသည် (၃၀) ခန့်ရောက်ရှိလာကြ ပြီဖြစ်သည်။ ကျနော် “ နွေတည ” ၀တ္တုကို ဆက်ဖတ်သည်။ ၀တ္တုထဲက အဓိကဇာတ်ကောင် ဆန်စက်အလုပ်သမလေး ခင်ဝေသည် အငယ်တန်းတောအုပ်ကလေး မောင်ကိုကို၏နောက်သို့ခိုးရာလိုက်ခဲ့၏။ ဓါတ်မီးတိုင်အလင်းရောင် မှိန်ဖျော့ဖျော့အောက်ဘော လုံးကွင်း မိုးရေစပ်စပ်တွင် ခင်ဝေသည် ဂျပန်ဖိနပ်ဟောင်းကလေးကိုစီးထားလေသည်။ သူတို့ နှစ်ဦး ဘောလုံးကွင်းပြင်ကြီးပေါ်တွင် တင်နေသည့် ရွှံ့ ဗွက်ရေအိုင်များကို နင်းလျှောက်လာနေကြလေသည်။
(ဒီဆောင်းပါးက ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်းတုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးပါ။ လူ့ ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ထုတ်ဝေတဲ့ ရေစီးသံဂျာနယ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ဥရောပခရီးသွားအခန်းဆက်ဆောင်းပါးတွေထဲက ဆောင်းပါးတပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ဝင်းဆွေ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကျနော်သွားလေရာ သယ်ဆောင်သွားလေ့ရှိတဲ့ နွေတည ၀တ္ထု ကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ကျနော်ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။ နွေတည၀တ္ထုတင်ဆက်နေတုန်း နိုင်ဝင်းဆွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေကို အခုလိုပဲ အခါအားလျော်စွာ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြသွား ပါဦးမယ်။)
(ထိပ်မှာတင်ထားတဲ့ လက်ရေးစာမူဟာ ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေ စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ ယွင်းနေချိန် ရေးခဲ့တဲ့ လက်ရေးစာမူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် အမှတ်တရ သိမ်းထားခဲ့မိပါတယ်။ )
Posted by ငြိမ်းဝေ at 7:34 PM
Labels: ခရီးသွား ဆောင်းပါး, နိုင်ငံတကာကဗျာ မိတ်ဆက်
မမသီရိ October 14, 2009 at 8:28 PM
ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေရဲ့ လက်ရေးမူကို မြင်ဖူးရပြီ
okn October 15, 2009 at 7:57 AM
ဥရောပ မဲဇာအသုံးအနူံးကို အရင်ကတည်းက ကြိုက်ပြီးသာ။ တခုရှိတယ် အဓိပ္ပါယ်မသိပါ။ ဒီလိုရှားပါးခေတ်မှာ( အကျယ်မပြောချင်ပါ) ဘာကြောင့် ပြောရသလဲပေါ့.....? ကြာတော့လည် နားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားရင်နဲ. .........?????
နွေတည မြစပယ်ရုံနှင့် ရေဆန်လမ်းပေါ်က နိုင်ဝင်းဆွေ
လွမ်းလိုက်ရတာ “နိုင်ဝင်းဆွေ”ရာ .....